Nhau - Iyo nzira yekunwa matcha uye mhedzisiro yematcha tii
Vanhu vazhinji vanosarudza matcha, uye vanodawo kusanganisa matcha poda pavanogadzira makeke kumba, uye vamwe vanhu vanoshandisa matcha poda yakananga kunwa. Saka, ndeipi nzira chaiyo yekudya matcha?
ChiJapanese Matcha: Geza ndiro kana girazi kutanga, wozodurura chipunu chematcha, dururira munenge 150ml yemvura inodziya (60 degrees inokwana), pwanya iyo matcha ine matcha brashi, unogona kuravira kuravira kwekutanga kweJapan Matcha mhemberero.
Ndeipi mhedzisiro yematcha
(1) Kunwa matcha kunatsiridza kuona
Matcha akapfuma mu-pro-vhitamini A, uye vhitamini A inoonekwa yekukurudzira. Sensitization zvinoreva "kusimudzira maziso".
(2) Inwa matcha kudzivirira mazino kuora
Fluorine ndechimwe chezvinhu zvekuteedzera zvinodiwa nemuviri wemunhu. Kushaikwa kwe fluoride kunokanganisa hutano hwemafuta emapfupa nemeno, uye matcha chinwiwa chechisikigo chine fluoride yakawanda.
(3) Inwa matcha kuti uzorodze pfungwa dzako
Matcha ine zvine mwero huwandu hwe caffeine, saka ine mhedzisiro yekusimudzira iyo yepakati tsinga system. Nokunhuwirira uye kunhuwirira kwemafuta asina kugadzikana ari mumatcha, inozorodza uye inozorodza.
(4) Inwa matcha kuwedzera vitamini C
Basa revhitamini C rakadzidzwa zvakanyanya mumakore achangopfuura, uye zvakagamuchirwa kuti kuwedzera vhitamini C yakakwana kunobatsira kudzivirira chirwere nekusimbisa muviri. Matcha ine kadhi rakapfuma vhitamini C. Iyo tembiricha yematcha tii haifanire kunge yakanyanyisa, kuitira kuti vhitamini C isazoparadzwa. Kunwa matcha ndiyo nzira yakanakisa yekuwedzera vhitamini C.
(5) Kunwa matcha ye diuresis uye kudzivirira kwematombo
Caffeine uye matcholine chimwe chezvinhu zvinosanganiswa mumatcha, zvinogona kudzivisa kudzokororwa kwetsvo tubules. Naizvozvo, yakanaka diuretic, iyo isingagone chete kutsetseka weti, kusimbisa itsvo mashandiro, kuitira kuti itsvo chepfu uye marara zvigadzirwa zvinogona kuburitswa nekukurumidza sezvazvinogona, asi zvakare zvinogona kudzivirira itsvo chirwere nematombo.
(6) Kunwa matcha kunatsiridza dumbu basa
Matcha ine alkaloids, chinova chinwiwa chine alkaline chinokanganisa chikafu chine acid uye chengetedza iyo yakajairwa pH (alkaline zvishoma) yemvura yemuviri. Uye zvakare, iyo tannins mune matcha inogona kudzivisa mabhakitiriya, caffeine inogona kuwedzera gastric muto secretion, uye mafuta anonhuwirira anogona zvakare kuputsa mafuta uye kubatsira kugaya, saka kunwa matcha kune simba rekuvandudza hutumbu.
(7) Kunwa matcha kuderedza kupisa kwemwaranzi
Iyo katekiniki mu matcha ine mhedzisiro yekudzikisira iyo radioactive element strontium uye kudzikisira kukanganisa kweatomic radiation. Inogona kurwisa kusvibiswa nemwaranzi mumaguta anhasi, saka inozivikanwa se "chinwiwa chezera reatomiki".
(8) Inwa matcha kudzivirira hypertension
Matcha akapfuma mumakatekini, kunyanya matcha, ayo ane chikamu chepamusoro chevhitamini P chiitiko, icho chinogona kusimudzira kugona kwemuviri kuunganidza mavitamini, kudzikisa kuunganidzwa kwemafuta muropa uye chiropa, uye chengetedza kuramba kwakajairika kwema capillaries Naizvozvo, kazhinji kunwa matcha tii kunobatsira kudzivirira uye kurapa yakakwira BP, arteriosclerosis uye coronary chirwere chemoyo.
(9) Kunwa matcha kudzikisa cholesterol uye kudzivirira kufutisa
Vitamini C mune matcha inobatsira kudzikisa ropa cholesterol, ichiwedzera kuomarara uye kusimba kwemitsipa yeropa, uye kuferefetwa muzvikwata zvekurapa zveFrance neJapan zvakasimbisa kuti kunwa matcha kunogona kudzikisa cholesterol uye kurasikirwa nehuremu.